Coinbase က Dogecoin ကိုဒေါ်လာ ၁. ၂ သန်းပေးပြီးစျေးနှုန်းများကျဆင်းသွားသည်
Coinbase က Dogecoin ကိုဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းပေးပြီးစျေးနှုန်းများကျဆင်းသွားသည်
ပြီးခဲ့တဲ့လအစောပိုင်းက Coinbase CEO၊ Brian Armstrong၊ လူကြိုက်အများဆုံး meme Dogecoin ကိုစာရင်းပြုစုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသည်မကြာသေးမီကဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အထင်ကြီးပြေးနောက်ကွယ်မှနှင့်အခြားဖလှယ်မှု၎င်း၏မြင့်မားသောကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်အနေဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းရရှိခဲ့ပုံကို။ နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုမှာ Coinbase သည် Dogecoin ကိုတရားဝင်စာရင်းပြုခဲ့သည်။ စတင်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Coinbase သည်ဖောက်သည်များအားပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့အထိ Doge မှဝင်ပေါက်လွှဲပြောင်းခြင်းကို Coinbase Pr o သို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အရ၊ Doge-USD၊ Doge-BTC, Doge-EUR, Doge-USDT နဲ့ Doge-GBP စတဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုအဆင့်သုံးဆင့်နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လုံလောက်သည်။ အဆိုပါအဆင့်Post- သာ, ကန့်သတ်သာနှင့် Full- ကုန်သွယ်ဖြစ်ကြသည်။ အမ်းစထရောင်းကပိုင်ဆိုင်မှုများထည့်သွင်းခြင်းသည် Coinbase အတွက်အဓိက ဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်စင်မြင့်ပေါ်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းအရှိန်အဟုန်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူသည် crypto စီးပွားရေးတွင်နေ့စဉ်ထည့် ၀ င်သောအရာများစွာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာမည်ဟုသူဝန်ခံခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရရန်အတွက်ပါ ၀ င်သူများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၆ ရက်မတိုင်မီ Coinbase တွင် Dogecoin ၏အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်ရောင်းဝယ်ရမည်။ ပထမဆုံးဆုသည် Doge ထံမှဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခြားဆုရရှိသူ ၁၀ ယောက်ကို Doge ထံမှဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဆုရရှိသူ ၆၀၀၀ သည် Doge တစ်ခုမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အနိုင်ရရှိသူများကိုဇွန် ၁၇ ရက်မှဆက်သွယ်မည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲလူတစ် ဦး နှုန်းတစ် ဦး ကန့်သတ်ထားသည်။ Coinbase အရ entries အများအပြားသည်အနိုင်ရသောအခွင့်အလမ်းကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Dogecoin ကုန်သွယ်မှုမရသေးဘူးဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။Coinbase.com ကို activate လုပ်သည်။ Dogecoin စျေးနှုန်းတုံ့ပြန်မှု မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ကြေငြာချက်သည်စျေးကွက်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ဓာတ်များဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ၂၄ မှ ၂၄ အတွင်းမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ နာရီ။ သို့သော်ကုန်သွယ်ရေးသည်ဒေါ်လာ ၀.၃၆ ဖြင့်နေ့စဉ်မြင့်တက်မှုမှ ၁၃% ကျဆင်းခဲ့သည်။ အချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Doge အပေါ်အငြင်းပွားနေကြသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းစျေးကွက်ရဲ့ ၂.၈% လွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ၂၈% ကျဆင်းသွားသည်။
2021 Hauts de France CybermatinéeSécuritéပြန်ဖွင့်မှုကိုရယူပါ
2021-06-22 00:26:18 | မင်္ဂလာပါ...
နွေရာသီတွင် Le Monde Informatique ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်သည်သင်၏CybermatinéeSécurité 2021 သံသရာသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ယနေ့ Hauts de France စင်မြင့်ကိုယနေ့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အထူးသဖြင့်Frédérick Meyer၊ Auchan Retail မှ CISO၊ ​​Jérôme Pellois, La Redoute ၏ CISO နှင့် Nicolas Bourgeois ၏သက်သေခံချက်မျ...
2021-06-21 16:32:09 | မင်္ဂလာပါ...
တောင်ကိုရီးယားရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများမြောက်ကိုရီးယားမှ Kimsuky APT သည်လတ်တလောတွင် KAERI ၏အနုမြူစွမ်းအင်သုတေသနဌာနကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားအနုမြူစွမ်းအင်သုတေသနအင်စတီကျုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၁၄ ရက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဆိုက်ဘာအဖြစ်အပျက်၏နောက်ကွယ်၌ VPN အပေးအယူတစ်...
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ blockchain နည်းပညာ၏လျှောက်လွှာ
2021-06-20 23:38:01 | ဘလောက်...
Blockchain နည်းပညာကိုဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) မှစားသုံးသူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဘဏ္goodsာရေးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတွင်ဘဏ္bankingာရေးကဏ္andမှထောက...
2021-06-20 22:30:30 | ဘလောက်...
Bitcoin ရန်ပုံငွေများသည် Federal Reserve ၏မျှော်လင့်မထားသော hawkish လှိုင်းများကြောင့်အကြွေစေ့များကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်သည်။ ByteTree Asset Management မှခြေရာခံအချက်အလက်များသည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါမှပိတ်ထားသောရန်ပုံငွေများနှင့်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရန်ပုံငွေများကိုသိမ်းဆည်းထားသောအကြွေစေ့အရေအတွက်ကိုပြသသည်။ ကနေဒါန...
2021-06-20 20:53:42 | ဘလောက်...
စီချွမ်သတ္တုတူးဖော်ရေးခြံများပိတ်တော့သည်။ ခုနစ်ရက်ကြာစာရင်းအင်းများအရ Bitcoin hashrate drop Bitcoin ကွန်ယက် hashrate သည်ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှ စ၍ ကျဆင်းနေပြီးစီချွမ်မိုင်းလုပ်သားများအနေဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ စီချွမ်သည်တရုတ်ပြည်၏ဒုတိယမြောက်လူထူထပ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ကင်းဘရစ...
စီးပွားရေးပညာရှင် Steve Hanke က Salvadoran bitcoin ကိုမွေးစားခြင်းသည်စီးပွားရေးကိုလုံးလုံးလျားလျားပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟုသတိပေးသည်
2021-06-20 20:50:09 | ဘလောက်...
စီးပွားရေးပညာရှင် Steve Hanke က Salvadoran bitcoin ၏မွေးစားခြင်းသည်စီးပွားရေးကိုလုံးလုံးလျားလျားပြိုလဲစေနိုင်သည်ဟုသတိပေးသည်။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်မှအသုံးချစီးပွားရေးပါမောက္ခ Steve Hanke သည်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါတွင် Bitcoin အသုံးပြုမှုကိုမကြာသေးမီကဝေဖန်ခဲ့သည်။ Hanke ကလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံသည်တရား ၀ င်တင်ဒါအဖြစ...
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောဖခင်၊ ဖခင်မဲ့သူ၊ Robert kiyosaki သည်ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးပြိုကျမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်
2021-06-20 20:48:41 | ဘလောက်...
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောဖခင်၊ ဆင်းရဲသောဖခင် Robert Kiyosaki ကကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးပျက်စီးမှုဖြစ်မည်ဟုသတိပေးသည်။ Bitcoin စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ တန် Robert Kiyosaki ၏အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာ Rich Dad Poor Dad သည်ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးပြိုကျမှုကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ Bitcoin စျေးနှုန်းသည်ဒ...
Wazirx သည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဗျူရိုကဖမ်းဆီးထားသောအိန္ဒိယ၏ 'crypto king' ကိုအသုံးပြုသူအားမပြောဟုဆိုသည်
2021-06-20 20:47:16 | ဘလောက်...
အိန္ဒိယမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဗျူရိုကဖမ်းဆီးထားသောအိန္ဒိယ၏ Crypto ဘုရင် - Wazirx သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအားမပြောပါအိန္ဒိယမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဗျူရို (NCB) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက် Bitcoin ကိုအသုံးပြုသည့်မွန်ဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူအားဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယလျှို့ဝှက်ငွေကြေးလဲလ...
တက္ကဆက်ပြည်နယ်အခြေစိုက် heb ကုန်စုံစတိုးများ၌ crypto ATM စက်နှစ်ဒါဇင်ကျော်ကိုတပ်ဆင်မည် -
2021-06-20 20:45:52 | ဘလောက်...
တက္ကဆက်ရှိ H-E-B ကုန်စုံစတိုးများတွင် crypto ATM စက်နှစ်ဒါဇင်ကျော်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ မကြာမီတက္ကဆက်ရှိနေရာနှစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိ H-E-B ၀ ယ်ယူသူများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Coin Cloud သည် crypto-automated teller machine (ATM) ပံ့ပိုးပေးသူတစ် ဦး ကပြောကြားရာတွင် H-E-B စတိုးဆိုင် ၂၉ ခုတွင်...
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များအတွက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု 31 စဉ်းစား - မီးခိုးရောင်
2021-06-20 20:44:24 | ဘလောက်...
Grayscale ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှု ၃၁ ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း Grayscale Investments သည် ၄ ​​င်း၏မိသားစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များကိုထည့်သွင်းရန် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု ၃၁ ခုကိုစဉ်းစားနေသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၃၂. ၉ ဘီလီယံရှိ...
ကနေဒါရှိဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများကို Bitcoin ဖြင့်ပေးချေရမည် -
2021-06-20 20:42:57 | ဘလောက်...
ကနေဒါရှိဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားများကိုကနေဒါအမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောလိဂ် Bitcoin CEBL တွင်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများကို၎င်းတို့၏လစာ၏တစိတ်တပိုင်းကို cryptocurrency တွင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကနေဒါဒေါ်လာစျေးလစာကို Bitcoin သို့ပြောင်းလဲရန်ကနေဒါလျှို့ဝှက်ငွေကြေးလဲလှယ်ရေး Bitbuy. Bitbuy န...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ယူရိုစီးပွားရေးကိုဖန်တီးရန်အရှိန်မြှင့်တင်ရန်စပိန် MEP များကအဆိုပြုထားသည်
2021-06-20 20:41:27 | ဘလောက်...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ယူရိုငွေကြေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်စပိန် MEP များကအဆိုပြုထားသည်။ စပိန် MEPs အုပ်စုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ယူရိုငွေကြေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုဇွန်လ ၈ ရက်တွင်တင်ပြခဲ့သည်၊ ယူရိုaရိယာတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလေ့လာရန်အုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းရန်တ...
2021-06-20 20:39:54 | ဘလောက်...
အထွေထွေ Ledger ဖောက်သည်များကသူတို့ကိုယ်ပိုင် Seeds ကိုခိုးယူဖို့မေးလ်ထဲမှာပိုက်ဆံအိတ်အတုများလက်ခံရရှိအထွေထွေ Ledger ဖောက်သည်များကသူတို့ Cryptocurrency ခိုးယူဖို့မေးလ်အားဖြင့်အတုပိုက်ဆံအိတ်လက်ခံရရှိသည်။ Ledger မှစွပ်စွဲခံရသည့်သံသယဖြစ်ဖွယ် packet တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိကြောင်း Reddit အသုံးပြုသူမှပြောကြားခဲ့...
ဘဏ္ansာရေး - danske ဘဏ်သည် crypto-ငွေကြေးများအပေါ်ရပ်တည်သည်။ crypto trading - ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်
2021-06-20 20:36:44 | ဘလောက်...
မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သော cryptocurrencies တွင် Danske ဘဏ်သည် cryptocurrencies တွင် crypto trading ၌ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် crypto trading နှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသတိထားချဉ်းကပ်သော်လည်းဒိန်းမတ်ဘဏ်သည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်...
ဘဏ္manာရေး - Bitcoin အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရန် Goldman Sachs သည် cryptocurrency စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော galaxy digital ကိုအားထားသည်
2021-06-20 20:33:50 | ဘလောက်...
Goldman Sachs သည် Bitcoin အနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် cryptocurrency စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ Galaxy မှအားကိုးအားထားပြုပြီးဖြစ်သည်။ Galaxy Digital တွဲဖက်ဥက္ကDam္ဌ Damien Vanderwilt သည်သူ၏ကုမ္ပဏီသည် Bitcoin အနာဂတ်ထုတ်ကုန်များကိုကူညီရန် Goldman Sachs နှင့်ပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤပူးပေါင်းမှုသည်အမေရိကန...